Obbo Jawar Mohammed fi Obbo Wandimmuu Ibsaa -Itti himnee dabarra – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsObbo Jawar Mohammed fi Obbo Wandimmuu Ibsaa -Itti himnee dabarra
Obbo Jawar Mohammed fi Obbo Wandimmuu Ibsaa -Itti himnee dabarra
Obbo Jawar Mohammed fi Obbo Wandimmuu Ibsaa
Itti himnee dabarra
Obbo Wandimmuu Ibsaa “waan Jawar KFOtti makameefan KFO keessaa bahe.” jedhe. Uummata Oromootu dhimma Wandimmuu Ibsaa dhagahuu dide malee baruma wayyaaneeyyuu Qeerroon Bilisummaa Oromoo uummataaf ifoomsee ture. Wandimmuu Ibsaa hidhamtoota siyaasaaf abukaatoo bilisaan isiniif taha jedhee dhugaa jiru erga irraa baree booda nama tika wayyaaneef gabaasaa ture,basaastuu wayyaanee hamaa ture. Hidhamtootni inni abukaatoo dhaabbateef kan ajjeefame yoo jiraate malee kan bilisa bahe hoomtuu hin jiru. Kana namootni nama kana abukaatoo dhaabbatan ragaa bahu. Addatti immoo hidhamtoota KFO fi ABO jedhee ilmaan Oromoo adda qooduun shira daangaa hin qabne nama dalage,gama biraan ilmaan Oromoo diyaaspooraa irraa immoo abukaatummaa bilisaan dhaabbadha jedhee maallaqa funaannachaa ture. Gargaarsi Jawar Mohammed taasisaafii ture summii itti haa tahu malee isa irraas nyaachaa ture. KFOn basaasummaa isaa irratti hubatus of keessaa baasuuf hooggantootni KFO mana hidhaa waan turaniif obsaan bira darbamaa ture. Erga wayyaaneen aangoo irraa buutees bifa jijjiirratee KFO basaasuu waan itti fufeef KFOn of keessaa arii’e. Burjaajjii siyaasaa namni kun wayyaanee irraa dirqama fudhatee uume yeroo biraa itti deebinus diinni diinummaan isaa saaxilamuun waan hin oolleef osoo danda’e hidhamtoota siyaasaa KFO irratti kunoo du’a murteesseera.
Viva Jaal Waaqoo Noolee
#Of qulqulleessuun Firummaa fi Diinummaa ofii ifatti ibsachuun waan gaarii dha. Bukoon MOORAA QABSOO BILISUMMAA OROMOO Bukeesaaa ture hedduun suutuma suutaan dhiqamaara!
“Ethiopian Suusii dha!” Projectiin Obbo Lammaa Magarsaa
Namoota hedduu waan booji’e fakkata! Galmeessi tokko ifatti Mooraa keenyaa baheera!
Haqaan haa ta’uu haqa malee warri Abukaatoo isiniif ta’e, kanneen kitaaba galataa bareesuufiif taatan waanuma inni hojjataa turee fi jiruun seenessaafii malee dalga hin barreesinaa! Obbo Wandimmuu ቻው Nagahatti, Bye Bye Ethiopia waliin fuldurri keessan “Ethiops”!
“Guyyaa Jawaar Mohammad fa’i KFOtti makaman hedduun gadde. Itoophiyaa kan diinomse Obboleessa koo maaf hin taane wajjin hin dhaabbadhu! Jijjiiramicha booda KFO keessatti hafuura ABO kan qaban kan Itoophiyaa hin jaallanne keessumaa uummata Amaaraa fi Amantaa Ortodoksiitiif jibbiinsa kanneen qaban paartichatti eega seenanii booda ani isaan wajjin itti fufuu hin dandeenye. Ani bara Wayyaaneen Baankiis, Taankiis to’attu sana kophaa koo uummata Oromoo, Amaaraa fi Guraageetiif bilisaan hojii seeraatiin/ xabaqaa ta’ee naman dhaabadhedha. Anaaf Lammiin Itoophiyaa kamiyyuu dhiiga kiyya. Ijoolleen koos ta’an Haati mana kootillee Itoophiyaarra hin caalan“
Ogeessa seeraa Obbo Wandimmuu Ibsaa